Fiakarana amin'ny fiavian'i Jesosy Fanindroany - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Ny hoavy > Ny fiakaran'i Jesosy
Ao amin’ny Asan’ny Apostoly 1,9 Izao no voalaza amintsika: “Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nakarina miharihary, ary nisy rahona nanala Azy teo amin’ny masony.” Tsotra ny fanontaniana mipetraka amiko: Nahoana?
Alohan'ny hiverenantsika amin'ity fanontaniana ity dia andao hizaha ireto andininy telo manaraka ireto: Ary raha mbola niambina ilay Mpamonjy very izy ireo, dia nisy lehilahy roa nitafy akanjo fotsy niseho teo akaikin'izy ireo: “Ry lehilahy Galiliana,” hoy izy ireo, inona no ataonao any ary mijery ny lanitra Ity Jesosy ity, Izay nakarina ho any an-danitra taminao, dia ho avy indray, tahaka ny ahitanao azy miakatra any an-danitra. Ary niverina tany Jerosalema izy ireo avy teo amin'ilay tendrombohitra antsoina hoe Oliva, izay eo akaikin'i Jerosalema, lalana iray sabata any ho any. ”(And 10-12).
Misy lafiny roa fototra amin'ity andalana ity - mandositra any an-danitra i Jesosy ary mbola hiverina indray. Samy manana ny lanjany lehibe ao amin'ny finoana Kristiana ireo teboka roa ireo, ary samy tafiditra ao amin'ny Creed Apost. Voalohany, Jesosy niakatra tany an-danitra. Amin'izany toe-javatra izany, matetika dia miresaka momba ny Lanitr'i Kristy isika, fialantsasatra izay ankalazaina isaky ny Alakamisy 40 andro aorian'ny Paka.
Io andalana io koa dia nanasongadina fa hiverina Jesosy - hiverina amin'ny fomba fiakarany ho any an-danitra izy. Raha ny hevitro dia io teboka farany io dia manondro ny antony niakaran'i Jesosy tany an-danitra tamin'ny olon-drehetra - tamin'io fomba io dia nohamafisina fa hiverina ho mazava ho an'ny rehetra ihany koa izy.
Mora ho azy ny nampahafantatra fotsiny ny mpianany fa hiverina any amin'ny rainy izy ary ho tonga eto an-tany indray andro any - dia ho nanjavona tsotra izao izy, toy ny amin'ny toe-javatra hafa, fa tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy ho hita intsony. , Tsy fantatro ny antony teolojika hafa noho ny fisehony mitsingevana mankany amin'ny lanitra. Tiany handefa hafatra ho an'ny mpianany sy amin'izy ireo ho antsika izy, te hampita hafatra manokana.
Tamin'ny alàlan'ny nanjavona ho an'ny rehetra, dia nasehon'i Jesosy mazava fa tsy hiala eto an-tany irery izy, fa hipetraka eo ankavanan'ny Rainy any an-danitra hitsangana ho antsika ho Mpisoronabe mandrakizay. Raha nametraka azy ny mpanoratra iray dia "olombelona any an-danitra" i Jesosy. Isika manana olona ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mahalala izay misy antsika, mahalala ny fahalementsika sy ny ilaintsika, satria izy tenany ihany. Na dia any an-danitra aza dia mbola olombelona ihany ary Andriamanitra tahaka azy ihany.
Na dia efa niakatra izy aza, ny Soratra Masina dia miantso azy ho olona. Rehefa nitory tamin'ny Atenianina tany Areopago i Paoly dia nilaza izy fa hitsara an'izao tontolo izao Andriamanitra amin'ny alàlan'ny olona nofidiny, ary i Jesosy Kristy io olona io. Ary rehefa nanoratra an'i Timoty izy dia niresaka taminy momba ilay lehilahy Jesosy Kristy. Izy dia mbola olombelona ary mbola toy izany ara-batana. Nitsangana tamin'ny maty ara-batana izy ary niakatra tany an-danitra. Iza no mitondra antsika amin'ny fanontaniana hoe aiza ny tena misy an'io vatana io? Ahoana no ahafahan'ny Andriamanitra tsy manam-petra, izay tsy manaiky fetra na ara-nofo, ao amin'ny toerana iray?
Ny vatan'i Jesosy mitsingevana any amin'ny habakabaka any? Tsy haiko. Tsy haiko koa hoe ahoana no nahafahan'i Jesosy nitety varavarana mihidy na nanohitra ny lalàn'ny hery. Mazava hoazy fa tsy mihatra amin'i Jesoa Kristy ny lalàna ara-batana. Na dia mbola misy eo amin'ny vatana aza izy io dia tsy miankina amin'ny fetra izay mahazatra amin'ny vatana ara-batana. Mbola tsy mamaly ny fanontaniana momba ny fisian'ny Vatan'i Kristy io eo an-toerana, saingy tsy tokony ho zavatra lehibe indrindra ho antsika ve izany?
Tokony ho fantatsika fa Jesosy dia any an-danitra, fa tsy izay tena izy. Zava-dehibe ho antsika ny mahafantatra ny vatan'i Kristy ara-panahy, ny fomba niasan'i Jesosy eto an-tany ankehitriny ao anatin'ny vondrom-piangonana. Ary manao izany amin'ny alalan'ny Fanahy Masina izy.
Miaraka amin'ny fitsanganany amin'ny maty ara-batana i Jesosy dia nanome famantarana hita maso fa mbola hitohy amin'ny maha-olona sy andriamanitra azy. Noho izany, azontsika antoka fa, amin'ny maha pretra antsika, dia mahatakatra ny fahalementsika Izy, araka ny voalaza ao amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo. Miaraka amin'ny Fiakarana miakatra ho an'ny rehetra, mazava ny zavatra iray: tsy nanjavona i Jesosy fotsiny - tsy hoe, amin'ny maha-mpisoronabe antsika, mpanolotsaina sy mpanelanelana antsika, dia manohy ny asany ara-panahy amin'ny fomba hafa ihany izy.
Hitako ny antony iray hafa niakaran’i Jesosy ara-batana tany an-danitra sy ho hitan’ny rehetra. Miaraka amin'i Jaona 16,7 voalaza fa hoy i Jesosy tamin’ny mpianany: “Mahatsara anareo ny fialàko. Fa raha tsy miala Aho, dia tsy ho avy aminareo ny Mpananatra. Fa raha handeha Aho, dia hirahiko ho aty aminareo izy.
Tsy azoko antoka hoe nahoana, saingy mazava ho azy, ny fiakaran'i Jesosy dia tsy maintsy nialoha ny Pentekosta. Ary rehefa nahita an'i Jesoa miakatra any an-danitra ny mpianatra dia fantatr'izy ireo fa ho avy ny Fanahy Masina nampanantenaina.
Noho izany dia tsy nisy ny alahelo, na farafaharatsiny tsy nisy na iray aza ny voatonona ao amin'ny bokin'ny Asa. Ny iray tsy sahiran-tsaina noho ny fahatsapana fa ny andro taloha niarahany tamin'i Jesosy izay nanolotra ny vatany dia zavatra taloha. Ny fotoana niarahana niarahana dia tsy natao ho filamatra. Fa kosa nifaly tamim-pifaliana ny ho avy, izay nampanantena fa hitondra zavatra lehibe kokoa, araka ny nampanantenain'i Jesosy.
Raha manohy ny lalàn'ireo Apôstôly isika dia hitantsika ny momba ny fientanentanana nataon'ireo rahalahy 120 tao amin'ny finoana. Nivory izy ireo mba hivavaka ary handamina ny asa amin'ny ho avy. Fantatr'izy ireo fa manana asa tokony hatao izy ireo, ary
noho izany dia nifidy apostoly izy hisolo ny toeran 'i Jodasy. Fantatr'izy ireo fa mila apôstôly 12 izy ireo hisolo tena ny Isiraely vaovao, ilay fototry napetrak'Andriamanitra. Nihaona izy ireo mba hihaona; satria be dia be ny fanapahan-kevitra.
Efa nasain'i Jesosy nitory eran'izao tontolo izao ho vavolombelony. Ny hany tsy maintsy ataon'izy ireo, araka ny nandidian'i Jesosy azy dia ny hiandry ao Jerosalema amin'ny fanomezana hery ara-panahy, satria azony ny mpanentana nampanantenaina.
Noho izany, ny fiakarana an'i Jesosy dia toy ny horonam-peo mahery vaika, fotoana fihenjanana amin'ny fiandrasana ny tara-batana voalohany izay tokony hamoahan'ireo apôstôly azy ireo ho lasa zava-dehibe kokoa amin'ny fanompoana eo amin'ny finoana. Araka ny nampanantenain'i Jesosy azy ireo, noho ny Fanahy Masina dia tokony hanao zava-dehibe kokoa noho ny an'ny Tompo Izy.Ary ny fiakaran'i Jesosy hita miharihary amin'ny rehetra dia nampanantena fa hisy zavatra lehibe kokoa hitranga.
Nantsoin’i Jesosy hoe “Mpampionona hafa” ny Fanahy Masina (Jaona 14,16); amin'ny teny grika dia misy teny roa samy hafa ny hoe "hafa". Ny iray dia midika zavatra mitovy, ny iray hafa; Miharihary fa mitovitovy amin’izany ny tian’i Jesosy holazaina. Ny Fanahy Masina dia tahaka an’i Jesosy. Izy dia maneho ny fanatrehan'Andriamanitra manokana, fa tsy ny iray ihany
hery fanampiny. Velona, ​​mampianatra sy miteny ny Fanahy Masina; mandray fanapahan-kevitra izy. Olombelona, ​​olona masina izy, ary anisan'izany Andriamanitra tokana izany.
Ny Fanahy Masina dia mitovitovy amin'i Jesôsy ary afaka milaza koa isika fa Jesosy dia miaina ao aminay, mitoetra ao amin'ny vondrom-piangonana. Nilaza i Jesosy fa ho avy izy ka hijanona miaraka amin'ireo mpino - manana azy ao aminy - ary manao izany amin'ny endrika ny Fanahy Masina. Ka lasa Jesosy, fa tsy navelany hody ho antsika intsony izy fa miverina amintsika aty amintsika amin'ny alalàn'ny Fanahy Masina.
Saingy hiverina amin'ny vatana sy ho an'ny rehetra ihany koa izy ary mino aho fa io no antony voalohany amin'ny fiakarany amin'ny endrika mitovy. Tsy tokony hieritreritra isika fa efa eto an-tany i endrika I Kristy ary efa niverina, ka tsy misy zavatra hafa antenaina mihoatra ny ananantsika.
Tsia, nohazavain'i Jesosy mazava fa tsy zavatra miafina, tsy hita maso ny fiverenany. Ho hazavana toy ny hazavan'ny andro, ary hazava sahala amin'ny fiposahan'ny masoandro. Ho hita eo amin'ny rehetra ny fiakarany, tahaka ny fiakaran'ny fiakarany rehetra avy amin'ny Tendrombohitra Oliva efa ho 2000 taona lasa izay.
Manome fanantenana antsika izany fa afaka antenaina kokoa noho izay ananantsika ankehitriny. Ankehitriny dia mahita fahalemena be isika ankehitriny. Fantatsika ny fahalementsika, ny an'ny fiangonantsika ary ny an'ny Fivavahana Lazaina fa Kristiana amin'ny fitambarany. Manantena mafy isika fa hiova ny zava-drehetra, ary manome toky i Kristy fa hiditra an-tsehatra amin'ny fomba manaitra tokoa izy, mba hanomezan'ny fanjakan'Andriamanitra ny fampandrosana tsy mbola nisy hatrizay.
Tsy havelany hisy intsony izy ireo. Hiverina toy ny fahitan'ny mpianany azy nanjavona any an-danitra izy - ara-batana ary hitan'ny rehetra. Anisan'izany ny antsipiriany iray izay tsy ho apetrako loatra ny maha zava-dehibe azy: ny rahona. Mampanantena ny Baiboly fa i Jesosy, dia toy ny fiakarany any an-danitra avy amin'ny rahona no hiverenan'ny rahona. Tsy fantatro izay dikan'ny hoe lalina kokoa - izy ireo dia tandindona ireo anjely niseho niaraka tamin'i Kristy, fa ho hita amin'ny endriny tany am-boalohany ihany koa izy ireo. Io teboka io dia azo antoka fa tsy dia manan-danja loatra.
Amin'ny lafiny iray kosa, ny fiverenan'i Kristy tena izy dia zava-dehibe indrindra ary hiaraka amin'ny tselatra ny hazavana, ny feo mandre sy ny trangan-javatra momba ny masoandro sy ny volana ary ho hitan'ny rehetra izany. Dia ho afa-bela. Tsy misy afaka hiteny hoe teo an-toerana sy teo io toerana io. Rehefa miverina i Kristy dia ho tsapa eny rehetra eny ny hetsika ary tsy hisy hanontany momba izany.
Ary rehefa tonga amin'izany, dia hanao tahaka an'i Paoly ao amin'ny 1. Taratasy ho an’ny Tesaloniana, nakarina tamin’izao tontolo izao, mba hihaona amin’i Kristy eny amin’ny rivotra. Amin'ity toe-javatra ity dia misy miresaka momba ny fampakarana, ary tsy hitranga amin'ny takona izany, fa ampahibemaso, ho hitan'ny rehetra; ho hitan’ny rehetra ny fiverenan’i Kristy eto an-tany. Ary noho izany dia mandray anjara amin’ny fiakaran’i Jesosy any an-danitra isika ary koa amin’ny fanomboana Azy, ny fandevenana Azy ary ny nitsanganany tamin’ny maty. Isika koa dia hiakatra any an-danitra hihaona amin’ny Tompo miverina, ary avy eo dia hiverina eto an-tany koa.
Tsy fantatsika anefa hoe rahoviana no hitranga izany rehetra izany. Manova na inona na inona eo amin’ny fomba fiainantsika ve izany? Tokony ho izany tokoa. ao amin'ny 1. Korintiana sy im 1. Mahita fanazavana azo ampiharina momba izany isika ao amin’ny taratasin’i Jaona. Izany no voalaza ao amin'ny 1. John 3,2-3: “Ry malala, efa zanak’Andriamanitra isika; nefa tsy mbola nambara izay ho toetsika. Fa fantatsika fa rehefa haseho, dia ho tahaka azy koa isika; fa ho hitantsika Izy araka ny maha izy azy. Ary izay rehetra manana fanantenana toy izany aminy dia manadio ny tenany mba hadio tahaka Azy”.
Avy eo i Jaona dia nanazava fa ny mpino dia mankato an Andriamanitra; tsy te hanana fiainana manota izahay. Ny finoantsika fa hiverina i Jesosy ary ny hitovizantsika toa azy dia misy fiantraikany azo ampiharina. Mahatonga antsika hiezaka hamoy ny fahotantsika. Izany dia tsy midika fa ny ezaka ataontsika dia hamonjy antsika na hanimba antsika ny fitondran-tena ratsy; kosa, midika izany fa mitady ny tsy hanota isika.
Ny fanazavana ara-baiboly faharoa momba izany dia hita ao amin’ny 1. Korintiana 15 amin'ny faran'ny toko fitsanganana amin'ny maty. Taorian’ny famelabelarany momba ny fiverenan’i Kristy sy ny fitsanganantsika amin’ny tsy fahafatesana, dia hoy i Paoly eo amin’ny andininy faha-58: “Koa amin’izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, ary miorena tsara, ary mitomboa mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny asanareo. ao amin’ny Tompo.”
Noho izany dia misy ny asany eo alohany toy ny talohan'ny mpianatra voalohany. Ny baiko nomen'i Jesosy azy ireo tamin'izany fotoana izany dia mihatra amintsika ihany koa. Isika dia manana filazantsara, hafatra iray tokony horesahina; ary nomena ny herin'ny Fanahy Masina hiaina mifanaraka amin'izany didy izany isika. Koa misy ny asa eo alohanay. Tsy mila miandry miandry fotsiny ny fiverenan'i Jesosy isika. Toy izany koa, tsy mila mijery andinin-teny isika hoe oviana no ho avy, satria ny Baiboly dia milaza amintsika fa tsy anjarantsika ny mahafantatra. Raha tokony ho, isika, dia manana ny toky fa ho avy, ary tokony ho ampy ho antsika izany. Misy asa mialoha antsika, ary tokony hanao izay rehetra azontsika atao atao isika mba hanaovana ny asan'ny Tompo satria fantatsika fa tsy very maina io asa io.